dhiri: kukiyinurwa pa & t lg v20 iri kutengeswa isingasviki $ 300 pane ebay
Kuru Nhau & Ongororo Deal: Yakavhurwa AT & T LG V20 iri kutengeswa isingasviki $ 300 paBay
Deal: Yakavhurwa AT & T LG V20 iri kutengeswa isingasviki $ 300 paBay
LG & apos; s gore rapfuura mureza, iyo V20 iri kutengeswa zvakare muUnited States. Kana iwe & apos; wanga uchitevera nhau nezve LG V20 inobata , ipapo unogona kunge uchiziva kuti iyo smartphone haina kumbobvira yawanikwa yekutenga isingasviki $ 300.
Zvakanaka, zvinoita sekunge kambani yave kutengesa iyo yakavhurwa vhezheni ye LG V20 ye $ 290 chete paBay. Kunyangwe iyo smartphone yakanyorwa nemutengo wepamusoro ($ 340), vatengi vanogona kusevha imwezve 20% nekushandisa kodhi yakaderedzwa pakubuda (PCOLUMBUS2017).
Ramba uchifunga kuti iyi ndiyo AT&T LG V20 (H910A) modhi, saka inongoshanda chete pamatanho eGSM muUS (ndine hurombo, hapana Sprint kana Verizon). Zvakare, Titan ndiyo yega nzira sarudzo inowanika kutengwa pa eBay.
Tichifunga nezve LG V20 ichiri kutengesa kuUS nemari inosvika madhora mazana mashanu chaiwo, iwe & apos; muchange muchichengetedza zvakanyanya nekuiwana paBay ye $ 290 - 42% kuti inyatsojeka. Chero bedzi iwe uchiraira iyo smartphone kubva mukati meUS, iwe & apos; iwe unenge uchitora yemahara kutumira zvakare.
mabviro: eBay kuburikidza AndroidPolice
apple tarisa 40 vs 44
T-Nhare kupa yemahara Lookout premium kudzivirira kwayo JUMP! uye Asurion vatengi
Yakanakisa maviri maviri SIM mafoni
Tarisa uone T-Mobile & apos; s izere runyorwa rweBlack Chishanu 2019 madhiri
Maitiro ekuona 360-degree YouTube mavhidhiyo pane Android